Posted by ကလိုစေးထူး at 5:48 PM
ko ' sayhtoo
u r unlucky man about LOVE. one day , u will meet the real one for u . i think .
May 19, 2007, 8:17:00 PM
မြိုင်ကလေးမှာ ဖေဖေ့အလုပ်ကိုသွားလည်ရင်းနဲ့ တလကျော်ကျော်လောက်နေဖူးတယ်။ ဘားအံကို ကားဆီထည့်ချင်ရင်သွားရတယ်။ ဈေးဝယ်ရတာ မိုက်တယ်။ ဓာတ်ဆီဈေးကတော့ တော်တော်ကြီးတာပဲ။ မှတ်မှတ်ရရ ကားနဲ့ လော်ရီကြီးနဲ့ ချိတ်မိလို့ workshopအပ်ပြီး လိုင်းကားနဲ့ပြန်ဖူးတယ်။ ကားခတွေက ရန်ကုန်လိုဟုတ်ဘူးနော်။ ဈေးကြီးတယ်။ အဲဒီကအဒေါ်ကြီးတယောက်က ရန်ကုန်မှာ ကားခ ၂၀(လွန်ခဲ့သော ၅နှစ်) ဆိုတော့ တန်လိုက်တာ ရန်ကုန်ရောက်ရင် ၃ပတ်လောက်စီးပလိုက်မယ်တဲ့။ ပြီးတော့တခါမှ ရန်ကုန်မရောက်ဖူးဘူးတဲ့။ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ စကားပြောတာလေးတွေက။ ဟီး... commentမှာ ရေးချင်တာတွေလျှောက်ရေးနေမိတယ်။ ဆောရီးနော်။ မြန်မာပြည်ကို သတိရသွားလို့။
i guess, the singer BA DIN was famous about 1992. as i passed 10th std in 92 ,me and my friends went to bago with his songs. u make me missed old days...btw, how long did u suffer ur brokenheart? i have suffered this pain for2years and still aching..:P give me some good medicine
May 20, 2007, 2:31:00 AM
အဲ ..နေ့လည်ခင်း အကြောင်း ဘယ်တော့ရေးမလဲ စောင့်ကြည့်နေတာ … ဒီနေ့မှ တွေ့တော့တယ်။
“တောတိုးရင် ပုဆိုးစုတ်တယ်” လို့ပြောတဲ့ “သူမ”ကို မောင်က ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ တိုးမှာပါ လို့ ပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ :P
ဒါနဲ့ စကားမစပ် တစပ် ... ပန်ဒိုရာ ပြောသလို
“လင်းကြက်ဆော်ချိန်၊ ဆွမ်းခံပြန်ချိန်၊ မွန်းတည့်ချိန်၊ မွန်းလွဲချိန်၊ မိုးချုပ်၊ သန်းခေါင်ကြက် တွန်ချိန်”တွေ အပြင် သက်ကြီးခေါင်းချချိန်၊ သူငယ်တိတ်ဆိတ်ချိန်၊ ခုနစ်စဉ်ကြယ်ပြောင် အမြီးထောင်ချိန် … အဲဒါတွေလည်း ရေးအုံးနော်။
May 20, 2007, 5:38:00 AM
တောတိုးရင် ပုဆိုးစုတ်တယ် ဆို
မင်းက ဘယ်တော ကို တိုးနေရလို့လဲလို့ မမေးလိုက်ဘူး ..
ဟီးး)မောင် နောက်တခါ တောတိုးတော့ဘူး..Hotel သွားမယ်ပေါ့..ဟုတ်လည်း ဟုတ်သားပဲ.. သူလည်း ဘယ်တောတိုးချင်တော့မှာလဲ..ဟားး) စတာပါဗျာ..
May 20, 2007, 6:01:00 PM
.... ပျော်စရာတော့ အကောင်းသား။ ...
......`ချစ်သူလမ်းကြား´ သို့ ချစ်သူမပါဘဲ လျှောက်၏။ ခပ်ကြောင်ကြောင်တော့ အနိုင်သား။...
.......အသည်းကွဲရသော အရသာက ခံရတော့ အခက်သား။..
>>> တော်တော်ဖတ်လို့တော့ အကောင်းသားဗျ
May 21, 2007, 2:04:00 AM
နဂျိန်းတောင် ကွန်မန့်တွေ ဘာတွေ ရေးလာပြီ။ :)
နေ့လည်အကြောင်းကို လာအားပေးကြတဲ့ မိတ်ဆွေများအားလုံး ကျေးဇူး အားရပါးရ အစစ်ကြီးတင်တယ်ဗျို့။ ဒီလောက်တောင် ရေးစေချင်နေတာ မျက်စိတမှိတ်တို့ လျှပ်တပြက်တို့ အချိန်တွေပါ ရေးလိုက်မှထင်တယ်။ :D
May 21, 2007, 5:11:00 PM